भगवानले पनि यस्तो सहनै नसक्ने पीडा त नदिनु नि! आमाछोराको यस्तो बिचल्ली, नजिकै गाउँपालिका र वडा कार्यालय छ, खै सरकार कहाँ छ? (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भगवानले पनि यस्तो सहनै नसक्ने पीडा त नदिनु नि! आमाछोराको यस्तो बिचल्ली, नजिकै गाउँपालिका र वडा कार्यालय छ, खै सरकार कहाँ छ? (भिडियो)
admin June 30, 2020 June 30, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाज	0
“खान पुगोस दिन पुगोस” आलोक जङ साउद को अभियान !बिच बजार र स्थानिय सरकारको आगनमा रमिते बन्दै करिब तिन वर्ष बाट एक परिवार ! -:जोसिपुर गाउपालिकाको जोशिपुर बजार अत्यन्तै बिजोक अवस्था मा बुडि आमा र नाबालक छोरा साहारा को पर्खाइमा !
जोसिपुर बजारको कृषि हाटबजार जाहा जोशिपुर गाउपालिका र आसपासका पालिका भरिकका जनता र नेताहरूको मनोरञ्जन र ठुला ठुला सभा र सम्मेलन गर्ने थलो त्यही थलोको नजिकैमा बिगत तिन वर्षदेखि बस्दै आएको बुढिआमा र नाबालक छोराको दर्दनाक अवस्था देख्दा लाग्छ यहाँ मानवता हराएको त छैन ?
सामाजिक अभियन्ता alok jung saud (9843938401)
निर्मला पन्तकाे बलात्कारी हत्यारा समात्न पठाइयो महिला टोली, को हुन यी सहासी महिला प्रहरी? जान्नुहाेस
राजालाई भेट्न सरू माता सहित मेचीदेखि महाकालीसम्म, हामी अन्योलमा बस्न चाहदैनौ – भिडियो सहित